Inja yeBeaglier - isiphambano esihle kakhulu seBeagle emhlabeni? - Izinhlobo
Inja yeBeaglier - isiphambano esihle kakhulu seBeagle emhlabeni?
I-Beaglier, nayo ibhalwe Owe-Beagelier noma I-Beagalier , iyinhlangano enamandla futhi ethembekile ewela phakathi kweBeagle neNkosi yamahhashi uCharles Spaniel.
Kungenzeka wake wayibona le ngxubevange njengoMolly kwifilimu ka-2019, Uhambo Lwezinja . Iqondiswe nguGail Mancuso, i-movie ilandela uthando lwenja lomnikazi wayo ngezikhathi eziningi zokuphila.
Hlangana nenja ye-Beaglier - Umthombo Wezithombe
Ingabe usukulungele ukuthola okwengeziwe ngale pooch yomklami?
Ngabe iBeaglier ibukeka kanjani?
Isimo: Ingabe ama-Beagliers ayizinja ezinhle zomndeni?
Unakekele ukuxuba kwakho kwe-Beagle Cavalier
Isikhathi sokuphila senja ye-Beaglier
Ukuthenga: Ingakanani injana yeBeaglier?
Ezinye izinhlobo ezithandekayo zeBeagle kanye neKavalier King Charles Spaniel kuxubeka
Ngabe iBeagle Cavalier ikuhlanganisela inja?
Ngenkathi ingxube yeBeagle-Cavalier kungenzeka ukuthi yadalwa ngengozi esikhathini esedlule, abalimi base-Australia baqala ngenhloso yokwenza izinja zeBeaglier ngesinye isikhathi ngawo-1990.
I-Beaglier yanelisa isidingo sabantu abathanda amandla amancane, aphezulu wamandla amaBeagles, kususa ukuzingela okukhulu nephunga lokushayela abaziwa ngalo.
Yize bengaziwa yiAmerican Kennel Club (AKC), amaBeagliers abonwa yi I-International Designer Canine Registry (IDCR), I-American Canine Hybrid Club (ACHC), i- Inja Registry yaseMelika (DRA), kanye I-Designer Dogs Kennel Club (DDKC).
Masiyazi kangcono le hybrid ngokubabhekisisa bobabili abazali bayo bangempela.
I-Cavalier King Charles Spaniel: Othandekayo nezemidlalo
Hlangana neCavalier King Charles Spaniel
Ngawo-1600s Inkosi yamahhashi uCharles Spaniel kwaba eqanjwe ngeNkosi yaseBrithani uCharles I , owayegcina lezi zinja ezinhle njengabangane.
Le fido yaba yintandokazi phakathi kwezicukuthwane, izicukuthwane, nezinduna zasebukhosini ezazithanda lolu hlobo ngobuhle bazo, umusa wazo nobumnene bazo.
Naphezu kwawo wonke lowo mlando, iKavalier King Charles Spaniel yaziwa ngokusemthethweni yi-AKC ngo-1995.
Le thoyisi spaniel ingamasentimitha angama-30 kuye kwangama-33 ubude futhi inesisindo esiphakathi kwamakhilogremu ayisithupha kuya kwayi-8.
Lezi zinja ezinemikhuba emihle nazo aziwa ngamajazi abo awusilika futhi ajikana nobude obuphakathi nendawo , namehlo abo amakhulu, ayindilinga anenkulumo yenja efudumele yenhliziyo.
Ngaphandle kokuba nejazi elinemibala emine ehlukene, kufaka phakathi i-blenheim (i-chestnut nomhlophe), i-tricolor (emnyama kokumhlophe), emnyama ne-tan, nobomvu be-ruby, le furball ingumchithi ojwayelekile.
Ngenxa yemvelo yokudlala nothando, akumangalisi ukuthi loluvemvane lomphakathi luthandwa ngobuntu balo.
I-Beagle: Iphunga elimangalisayo hound
Hlangana neBeagle emangalisayo
Singalandelela umlando we- Amabhele emuva kuma-1800s lapho ayekhona ezifuywa njengephunga hound ukulandelela hares emaphaketheni eGreat Britain. Yize, olunye uhlobo lwalolu hlobo kungenzeka lube khona cishe iminyaka engama-2 000.
Bangeniswa e-United States ngawo-1860s futhi babonwa njengelungu le-hound group yi-AKC ngo-1885.
Njengamanje, bakleliswe kunombolo 5 wama-194 hounds eqenjini, ngokusho kwekennel club.
Ubuwazi ukuthi izinja zeBeagle ziza ngosayizi ababili abahlukene?
Uhlobo oluncane, olwaziwa nangokuthi yi- AmaPocket Beagles , ingaba nesisindo samakhilogremu angu-22 kuye kwangama-30 futhi ingaphansi kwamasentimitha angu-33 ubude.
I- uhlobo olujwayelekile inokuphakama kwamasentimitha ayi-13 kuye kwangama-15 (33 kuya kuma-38 cm) futhi inesisindo esifinyelela kumakhilogremu angu-16.
Ungazithola lezi zinja ezinhle ngemibala ehlukahlukene, kufaka phakathi okubomvu nokumhlophe, umbala omthathu nomhlophe, ulamula okhanyayo, neminye eminingi!
Izinja zomklami zingazuza njengefa ezinye zezici ezinhle kakhulu zomzimba zabazali bazo abangenacala.
Kunezimo lapho umdlwane weBeaglier ungabukeka noma ufane neBeagle noma iCavalier Spaniel. Uma ufuna i-hybrid efana nale fido, zilungele ukumangala.
Ngokuvamile, iBeaglier izoba ne- Amehlo amnyama, azwakalayo ukuthi zombili izinhlobo zabazali bayo zinesifonyo esifushane.
Ukuhlanganisa lezo zici ne- izindlebe ezithambile inika ukuxuba kweBeagle Cavalier ukubukeka okuhle kakhulu, okufana nomdlwane kukho konke ukuphila kwayo!
Ukukunikeza umbono wokuthi injana yakho yeBeaglier ingabukeka kanjani, bukela le vidiyo bese uhlangana noTilly. I-Beaglier ethanda ipulazi evela e-Australia:
Usayizi we-Beaglier: Bafika kangakanani?
Kunokwehluka okumbalwa uma kukhulunywa ngosayizi womxube weBeagle Cavalier.
Imvamisa, iBeaglier iyinja ejwayelekile yesilinganiso esiphakathi nendawo enokuphakama kwe- Amasentimitha angu-12 kuya kwangu-16 (30 kuya ku-40 cm) nesisindo se- Amakhilogremu ayi-10 kuye kwangama-20 (4 kuye ku-9 kg).
Lolu hlobo lufanelana kahle nezindawo ezahlukahlukene - kusuka emakhaya amakhulu anamagceke amakhulu kuya ezindlini ezincane zasedolobheni.
Ngenkathi iBeaglier kwesinye isikhathi ingaba nengubo ende ejiyisayo yomzali weKing Charles Cavalier noma izinwele ezimnyama zeBeagle, ikakhulu uboya obufushane futhi obucwebezelayo .
Ngokufanayo, umbala wembuzi yakho ohlanganisiwe wezinkukhu ungahluka ngokuya ngabazali, futhi umdlwane onemibala eqinile kungenzeka. Inhlanganisela yembala evame kakhulu umbala onsundu, omnyama, ukhilimu noma omhlophe.
I-Beaglier iyi inketho emnandi yemindeni . Le cutie ikhombisa imvelo enothando olukhulu futhi ifisa ukunakwa.
Hlangana no-Ellie, the Beaglier - Umthombo wesithombe
Yize zilungile phakathi kwezingane, izilwane ezincane ezifuywayo zibuthakathaka futhi zingalimala kalula yizingane ezingazi ukuthi ziziphatha kanjani ngokunakekela. Ngalokho kusho, le canine Kunconywa emindenini enezingane ezindadlana .
Futhi, inhlanganisela yeBeagle Cavalier ivamise ukubambelela kwilungu elilodwa lomndeni noma kumuntu oyintandokazi. Ngeke ikubekezelele ukushiywa yodwa isikhathi eside njengoba kunjalo ingahlushwa ukukhathazeka ngokwehlukana .
Kodwa-ke, uma ufuna inja ethandekayo efuna ukugoqwa nokuthandwa ngokungaguquguquki, khona-ke lokhu kungaba yingane eboya ephelele!
Ngaphandle kothando lwabo phakathi kwabantu, Ama-Beagliers angazwana nezinye izinja, kodwa asikwazi ukusho okufanayo ngezilwane ezifuywayo ezincane njengamakati, amagundane, nonogwaja.
Kusengenzeka ukuthi le doggo ingazuza njengefa ukuzingela nokujaha umuzwa womzali wayo weBeagle, okungaholela enhlekeleleni.
Ngakho-ke, ngaphandle kokuqinisekisa ukuthi umngani wakho we-canine uyadlelana nabantu kusenesikhathi, labo abanezinye izingane ezinoboya kufanele babazise kuBeaglier kancane.
Lolu hlobo oluxubekile alukhonkothi kaningi, kodwa lwenza umsindo ohlukile, okwenza ama-Beagliers izinogada ezinhle .
Uma kukhulunywa ngokuqeqesha inhlanganisela yeBeagle Cavalier, ijaji lisaphumile. Abanye abanikazi bathi kulula ukuziqeqesha kanti abanye bakusho ukuthi kuyinselelo impela.
Lokhu kungabangelwa isimo sokwesaba seCavalier King Charles Spaniel noma izici zenkani zikaBeagle.
Kunoma ikuphi, ukungaguquguquki kuyisihluthulelo. Le ndlela evundlile iphendula kahle ukuqinisa okuhle nemivuzo ngendlela yokuphatha. Ngesikhathi sokuqeqeshwa, qina kodwa ube nesineke ngokweqile ukuthola imiphumela emihle.
Ngenxa yengubo yayo emfushane, iBeaglier ithathwa njengesondlo esiphansi.
Kodwa kungcono ukwazi ukuthi le pooch ayenzi kahle esimweni sezulu esibi kakhulu . I-Beaglier ingadinga i- ijezi lezinja ebusika, bese kuthi a isivikelo selanga ukuvikela isikhumba sakhe ehlobo.
Izinga lamandla eliphezulu le-Beaglier
Ama-Beagliers asebenza kakhulu. Lokhu kungasho ukuthi ngesinye isikhathi, bakhetha ukudlala kunokugonwa. Imizuzu engamashumi amathathu ukuya ehoreni lokuzivocavoca nsuku zonke kwanele le nja yomklami.
Ngaphezu kokuhamba kwakho kwansuku zonke, iBeaglier izothanda izikhathi ezimbalwa zokudlala neminye imisebenzi efana nokubhukuda. Kodwa-ke, isilwane sakho singalahlekelwa amandla ngokushesha ngenxa yomzimba womzali weKing Charles Cavalier.
Futhi unesithukuthezi kalula futhi ujwayele ukulandela lelo khala elizalwa nguBeagle . Bhekana nakho ngokunikeza okuhle uhlafune amathoyizi futhi uqinisekise ukuthi igceke lakho libiyelwe ukuvimbela i-canine pal yakho ekuhogeleni, ekumbeni, noma ekujaheni indlela yokuphuma!
Lapho uphuma nenja yakho, ungayishiyi inganakiwe ngoba inganyamalala kumishini ngokushesha okukhulu.
Hlangana noBeaux, i-Beaglier - Umthombo wesithombe
Ukuzilungisa: Ingabe ama-Beagliers ayachitha?
Ama-Beagliers anjalo kubhekwe njengabadilizi abaphansi , kepha uma bezuza ijazi lomzali wabo waseSpaniel, bangahle bachithe kaningi.
Ngenkathi kulula ukuzilungisa, lokhu kuhlangana kudinga ukuhlonipha ukuxubha okungenani kanye ngesonto ukugcina uboya babo busesimweni esiqophile phezulu, futhi bagweme amacansi kanye nemiphimbo.
I-Beaglier’s Izindlebe ze-floppy kufanele zihlolwe nsuku zonke ukuqinisekisa ukuthi azinayo imfucumfucu, izinambuzane, nomswakama, okungaholela ezifweni zamagciwane.
Kufanele futhi xubha amazinyo enja yakho nsuku zonke njengoba izinhlobo ezincane zingaphathwa kalula isifo samazinyo .
Izipikili zinganqunywa kanye ngenyanga , ngenkathi ukugeza kufanele kwenziwe kuphela lapho kunesidingo noma njalo ezinyangeni ezintathu. Ukugeza ngokweqile kungaholela esikhunjeni esomile, esintekenteke.
Uboya bayo ngeke budinge ukusikwa, kepha inqubo yokuzilungisa ingaba yingxenye ebalulekile yokubopha inja yakho.
Zama futhi lungisa inja yakho wedwa kunokuba umyise egumbini lezinja.
Ukudla okufanele inhlanganisela yeBeagle Cavalier
Kufanele wazi ukuthi lolu hlobo luhlobo othambekele ekutholeni isisindo njengoba bevame ukudla yonke into nanoma yini ebekwa phambi kwabo.
Ngenkathi ukuba nomuntu ongadli okungajwayelekile kungazwakala njengephupho, namathela esimisweni esiqinile sokudla, futhi ungashiyi ukudla okungagadiwe ukugweme ukukhuluphala kwe-canine .
Lapho usuthisa i-Beaglier yakho, funa i-kibble eyomile esezingeni eliphezulu eyenzelwe ngokukhethekile izinhlobo ezincane ezinamandla amaningi.
Umxube wakho weBeagle Cavalier uzodinga mayelana 1 to 1 ½ izinkomishi kwalokhu kudla nsuku zonke ngalesi silinganiso hlukanisa phakathi kokudla okungu-2 noma okungu-3 .
Njengoba iBeaglier iyinja enqamulelayo, kungenzeka iphile isikhathi eside kunabazali bayo abangaxutshiwe njengoba izinja ezingama-hybrid zaziwa ngokugwema ezinye zezifo ezibucayi ezithinta izinja ezifuywa kakhulu.
Ngenxa yalokho, ungalindela ukuthi iBeaglier yakho ibe ne- isikhathi seminyaka eyi-10 nengu-15 .
Lokho kusho ukuthi, le ngxubevange isengadla ifa lokunye kokugula okungenzeka ukuthi abazali bayo bathola.
Ama-Beagles athanda uku i-hip dysplasia , kuyilapho uCavalier King Charles Spaniel evame ukuhlupheka patellar ukunethezeka , lapho ziwuhlobo lwesibili olunamathuba amaningi okuhlupheka kulokhu kukhathazeka kwezempilo.
Ezinye izinkinga ezivamile zempilo okufanele uziqaphele yizinkinga zezinsini namazinyo, ukwehluleka kwenhliziyo okubangelwa isifo se-mitral valve , syringomyelia, iso le-cherry noma i-glaucoma, isithuthwane, i-hypothyroidism, kanye nokuphazamiseka kokuzwa okuhlukahlukene noma ukutheleleka kwezindlebe.
I-Beaglier ingaba ne- isilinganiso semidlwane engu-6 kudoti , futhi umdlwane ngamunye ungabiza nxazonke $ 500 kuya ku- $ 1,200 .
Uma intengo yanoma yimuphi umdlwane okhangisiwe ibonakala yinhle kakhulu ukuthi ingaba yiqiniso, kungenzeka. Ngakho-ke, qiniseka ukuthi uthenga umdlwane kumfuyi onedumela elihle.
Hlangana neCoder, injana yeBeaglier - Umthombo wesithombe
Okukodwa kwe izimpawu ukuthi usebenzisana nomfuyi onomthwalo wemfanelo ukubheka ukuthi bazinakekela kanjani izifuyo zabo ezizalanayo.
Ngalokho kusho, kufanele wazi ukuthi umzali omkhulu ohlanzekile kufanele abe ngumama lapho ethenga izinhlobo ezixubekile ngoba kulula ngabo ukuqhubeka nokukhulelwa nokuzalwa komdlwane. Kulokhu, lowo ngumzali weBeagle.
Ungakhohlwa cela isheke eligcwele le-vet kanye nesitifiketi sezempilo zombili izinja ezingabazali lapho zivakashele indawo yokuzalanisa.
Ukuthola iBeaglier kumfuyi
Usukulungele ukubheka imidlwane ye-Beaglier etholakalayo online? Sithole amanye amawebhusayithi okufanelekile ukuwahlola.
Futhi, ngaphambi kokuxhumana nomfuyi, qiniseka ukuthi usukulungele ukubuza nokuphendula okunye imibuzo ukwenza isiqiniseko sokuthi wena nomdlwane niyafanelana.
Nabafuyi be-Beaglier abatholakala eTennessee ukuze uqalise kusesho lwakho:
Okuhle Kwami Kokubili (IBethpage, TN)
Izingane Zenjabulo Zentaba (EManchester, TN)
Ipulazi iLittle River (IHohenwald, TN)
Uma ungekho e-U.S., Sithole abanye abafuyi be-Beaglier abase-Australia:
I-Chevromist (Ukuwela kwe-Hoppers, VIC)
Ama-Beaglier Bubs (NSW)
Ungahlola nezimakethe eziku-inthanethi, njenge Imidlwane yaseGreenfield , ukubona eminye imidlwane ye-Beaglier etholakalayo ukudayiswa.
Yize kungaba nzima ukuthola ukuxuba kwe-Beaglier ukwamukela, indawo enhle yokuqala kungaba amasayithi wokutakula abazali bayo.
Kufanele wazi futhi ukuthi ukuthola imali kushibhile njengoba izindleko zingaqala kusuka $ 50 kuya ku- $ 100 . Baphinde baqinisekise ukuthi izinja ziphilile futhi ziqeqeshiwe ukuze zikulungele ukugoduka nabanikazi abasha.
Zama lezi zingosi zokutakula njengoba usesha injana yeBeaglier ephelele:
ICavalier Alliance for Rescue, Research, and Education, Inc . (IBedford, MA)
IColorado Beagle Rescue, Inc. . (ILittleton, CO)
Ukutakulwa Kwe-Lucky Star Cavalier (IKarmeli, CA)
I-SOS Beagle Rescue, Inc. (Atco, NJ)
Uma ubuthatha injana yeBeaglier njengenja yakho elandelayo, ungahle ube nentshisekelo kwezinye izingxube ezihle kakhulu zeBeagle noma zeCavalier:
I-Boggle : Ukuhlanganiswa kweBoxer neBeagle
I-Beagador : Ukuxuba kwe-Beagle neLab
I-Cheagle Ukuhlanganiswa kweChihuahua neBeagle
I-Cavachon : Inkosi yamahhashi uCharles Spaniel noBichon Frize mix
ICavapoo : I-Cavalier King Charles Spaniel ne-Poodle mix
Ngenkathi iBeaglier iyinja yomndeni ethandekayo futhi emnandi, kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi indlela yakho yokuphila ifana nale nhlanganisela.
Lezi zinja ngeke zihambisane kahle nezinye izilwane ezifuywayo, futhi ukuqeqeshwa kungaba yinto ekhohlisayo.
Lokhu kuqhekeka kuzodinga nenani elihle lothando nokuzivocavoca ukuze kuligcine lijabule, futhi ngeke wazi ngokuphelele ukuthi inja izobukeka kanjani noma izosebenza kanjani ize ikhule.
Ingabe unayo i-Beaglier? Yabelana ngemicabango yakho nathi ngale nja yomklami ngokuphawula ngezansi.
Okuhle Kakhulu Kwenzalo Ezimbili: Bheka I-Husky Lab Mix
I-Complete Alaskan Husky Dog Breed Guide & Izithombe
I-Giant Alaskan Malamute: Ingabe Lokhu Kuzala Kukhona?
IBichon Poodle: Yazi inja ye-teddy yokugcina ethandekayo
Imininingwane ye-Husky Lab Mix Breed: Intengo, Imidlwane Nokuvela
Inja yeHarrier: Konke odinga ukukwazi ngaleli phakethe elisebenzayo
Konke Odinga Ukukwazi Nge-Border Collie-Lab Mix
Amagama ayi-121 amaHusky - Khetha igama eliphelele leHusky yakho
Amagama Ezinja angama-250: Uhlu Lokugcina Lwama-AZ lwamagama amahle kakhulu wezinja
Ingabe Imidlwane Ilala Kangakanani? Isibali sokulala sePuppy
Inja ye-Greyhound Breed FAQ nolwazi
inja yokuxuba i-maltese shih tzu
yini umgibe okhukhwini
izinja zelebhu nomshayi wesibhakela
Inja yaseJalimane eyelusa amagama isifazane
ukwakha ibhokisi elihluphayo lenja enkulu yokuzala
ingakanani ingxube ye-shih tzu poodle